Appt 4/6 pers. emazantsi amathambeka iVal Louron
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguFlorent
Ifumaneka phantsi kweenyawo ze-ski lifts, entliziyweni ye-resort ye-Val Louron, le ndlu inokuhlala ukusuka kwi-4 ukuya kwi-6 abantu ikunika umbono ocacileyo wentlambo. Ihlaziywe ngoDisemba ka-2019, ibekwe kumgangatho we-4, kunye ne-elevator. Iivenkile zasekuhlaleni (ivenkile yegrosari, iiresityu, ...) zifumaneka kumgama wama-50m ukusuka kwindawo yokuhlala.
Indawo iquka yokungena USB, igumbi lokuhlala kunye nekhitshi baxhotyisiwe kwaye ndawo lounge kubandakanywa umandlalo isofa (160x200), balcony netafile encinane ngaphandle, lokulala kabini (140x200), lokulala encinane esililini kwibhanka kunye lokuhlambela. Ilokhi yangasese ye-ski iyafumaneka ekungeneni kwendawo yokuhlala. Ixhotyiswe kakuhle, ikunika iTV, itoaster, umenzi wekofu weDolce Gusto, iketile, imicrowave, ioveni, induction hob + hood, idishwasher, iseti yefondue, iraclette kunye negrill yamatye. Indawo yokuhlala ayitshaywa kwaye izilwanyana zasekhaya azivumelekanga.
4.69 · Izimvo eziyi-26
Isikhululo esingenamoto (indawo yokupaka ezantsi kwendawo yokuhlala), iVal Louron iqinisekisa ukuhlala ngoxolo nosapho okanye abahlobo. Uhambo lufutshane, lulula kwaye lukhuselekile. Le ndawo ilungele ukutshaja iibhetri zakho, ngakumbi, yenye yezona ndawo zimangalisayo zabaqalayo ePyrenees, embindini wemithi yefir. Ilungele i-glides yokuqala yabantwana abaselula. Phezulu kweemithambeka, kwindawo ephakamileyo ye-2100m, iimbono eziphefumulayo zeLake Génos kunye nentlambo yaseLouron ziyakuvuyisa kuphela abahambahambayo kunye nabatyibiliki.
Umbuki zindwendwe ngu- Florent